Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in Android Phones
Sidee si ay u gudbiyaan Photos, SMS, Music, Video & Xiriirada ka Nokia in Android
Ma jiraan wax ka xun yahay isagoo helay brand phone cusub oo keliya si aad u ogaato in aad kuma wareejin karaan xiriirada ka jir Nokia ah in aad telefoon cusub Android ay. Haddii aan la xiriiro, ma aad samayn kartaa taleefan ama idinku soo diro fariimaha qoraalka ah oo dhan. Dhab ahaantii, uma baahnid inaad si dhibaato oo dhan. In kastoo saarayaasha ee telefoonada kala duwan marnaba bixiyaan doorasho kasta to content ka mid madal si kale lagu wareejiyo, waxaa weli jira workarounds badan. Maqaalkani waxa aad mid ka mid ah qalab ugu fiican soo bandhigi doonaa - Wondershare MobileTrans , in sawiro, fariimaha qoraalka ah, music, videos, xiriirada, iyo in ka badan wareejiyo ka Nokia in telefoonada Android.
Wondershare MobileTrans - 1-Guji Nokia in Transfer Android
Tallaabooyinka lagu Isticmaal Wondershare MobileTrans si ay u gudbiyaan Content ka Nokia in Android
Sida aan kor ku soo sheegnay Wondershare MobileTrans in uu awoodo in uu wareejiyo xiriirada, fariimaha, videos, sawiro, iyo files audio ka Nokia in telefoonada Android iyo murriyado (Eeg dhufto taageero dheeraad ah iyo noocyada file halkan ). Tallaabooyinka in aad nuqulka files ka Nokia in Android waa isku mid. Hoos waxaan si gaar ah ay u sheegi doonaan sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia qalabka Android. Haddii aadan u baahan tahay inaad nuqul ka content oo dhan ka Nokia in Android, in ay qaataan ammaanka xogta aad tixgelin, fadlan isticmaal feature gurmad loogu MobileTrans in xogta gurmad ku saabsan qalabka Nokia .
Tallaabada 1. Download iyo Run Wondershare MobileTrans
First of dhan, download iyo rakibi Wondershare MobileTrans on your computer. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose below.Connect aad Nokia iyo telefoonka Android inay computer la fiilooyinka USB, iyo in la hubiyo in ay si guul ah lagu ogaan karaa your computer. Kaliya waxay u shaqaysaa, ma barnaamijka aqoonsan qalabka aad. Markaasuu u tag tallaabada xigta.
Tallaabada 2. Dooro content ku saabsan Nokia in Android
Marka qalabka aad si fiican u xiran, guji "Phone in Transfer Phone" ee uu furmo suuqa hoose. Markaasay aad hal guji iska si ay u gudbiyaan aad Nokia in Android ka. Dooro xogta ku saabsan Nokia in aad rabto in aad trasnfer in aad Android sax ku sameeyo sanduuqa horteeda noocyada faylka. Iyo in la hubiyo in aad telefoon Nokia la ogaado sida isha ku saabsan barnaamijka iyo Android waa Ahaado. Waxaad isticmaali kartaa "Flip" button ay u wareegaan meelaha ay.
Haddii aad leedahay telefoonka Nokia oo ku salaysan nidaamka Windows, Mobiletrans Wondershare kaa caawin kara inaad ka Photos, videos, Music files si toos ah u gudbiyaan. Wixii Xiriirada, fadlan dib ilaa hore OneDrive, ka dibna riix Soo Celinta ka kaabta on Mobiletrans si loo soo celiyo xiriirrada xoojiyaa qalabka Android.
Tallaabada 3. Hal click si ay u gudbiyaan oo dhan ku Nokia in Android
Marka wax walba waa diyaar, guji "Start Copy" hoos nooca file iyo sug ilaa habka dhamaato. Ka dib markii in, waxaad arki kartaa dhammaan xogta laga soo wareejiyay Nokia ku saabsan Android.
Articles More faahfaahsan oo loogu talo ka Nokia telefoonada kale wareejinta content
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka Nokia in Samsung
Hagaha Bedelka Xiriirada ka Nokia in Nexus 5
Sida loo dhaqaaq Xiriirada ka Nokia in HTC
Xiriirada kaabta, SMS, Video, Photos on Nokia
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, Photos, SMS, Music iyo Video laga soo Nokia in Android